Teny fampidirana nataon'Andriamatoa Praiministra nandritra ny Fihaonan'ny Governemanta sy ny Solombavambahoaka | Primature
Andriamatoa Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena,
Ianareo Mpikambana ao amin’ny Birao maharitra,
Ianareo minisitra mpikambana ao amin’ny governemanta,
Ianareo solombavambahoaka,Isika rehetra manatrika etoana,
An-kafaliana hatrany no ahatongavanay eto anivon’ny Antenimieram-pirenena. Tsy ho fanajana ny Lalàmpanorenana ihany fa amin’ny maha raharaham-pirenena azy, dia fantatrareo tsara fa manana andraikitra amin’izany isika, na ianareo mpanao lalàna na izahay mpanatanteraka.
Telo herinandro izay no nanaovako ny tatitra mikasika ny asa vitan’ny governemanta mifanaraka amin’ny politika Ankapoben’ny Fanjakana (PGE).Tamin’ny taona 2020 no nitondràna ny fanamby tsy maintsy atrehintsika sy ny zava-bita niaraha-nanao ary ireo vava asa samihafa toy ny :
– ady amin’ny valanaretina corona virus,
– fanohizana ny fanatsarana hatrany ny fitantanana,
– fametrahana sy famerenana ny filaminana sy fandriampahalemana, ary ireo fanamby natao hanomezana aina vao ny toekarena sy ny fotodrafitrasa famokarana isankarazany; tsy diso anjara ihany koa ny sosialim-bahoaka izay notanisaina tamin’ny antsipiriany.
Betsaka ny dingana vita tamin’ny fanatanterahana ny PGE , niainga tamin’ny Vinan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ; izay mametraka mazava tsara fa : « tsy misy asa izay entina hanovàna ny tantaran’ny firenena raha tsy misy ny fifandraisana mahomby eo amin’ny Andrim-panjakana misy » Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika izao ary mibaiko zavatra maro amin’ny fanatanterahana ireo fanamby izany, toy ny eo amin’ny sehatra ara-pahasalamana, ara-toekarena, ara-tsosialy ary eo amin’ny lafiny tontolo iainana.
Izany no mahatonga anay tsy hianona fotsiny amin’ny tatitra ankapobeny izay nataoko sy ireo tatitra amin’ny antsipiriany efa nataon’ny mambran’ny governemanta, satria ny fiainam-pirenena dia mivoatra hatrany ka rariny raha mihaona indray isika izao.
Laharam-pahamehan’ny Fanjakana ny fanomezana aina ny toekarena Malagasy, amin’ny alalan’ny famoronana asa ateraky ny fampiasam-bolam-panjakana amin’ny fananganana fotodrafitrasa samihafa ilain’ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny tontolo eny ambanivohitra.
Tanjona iaraha-mahatratra ny fametrahana tontolo iray mifototra amin’ny fijerena ny fandriampahalemana. Ka izany no nahatonga antsika mametraka Tanjona amin’ity taona ity; ka tokony hahatratra 4,3% ny harinkarena faobe. Izay no mahatonga antsika hametraka ho laharam-pahamehana ihany koa ny haha maritoerana ny sandam-bola Malagasy; hahafahana mifehy ny mety ho vokatry ny fikorontanan’ny toekarena eran-tany eo amin’ny vidim-piainana izay tsy tokony hihoatra ny 6%.Izay ny fanamby miandry ny firenena , izay làlana hizoran’ny firenentsika.
Maniry dia maniry aho mba ho ao anatin’ny fifanajana, izay Soatoavina maha-malagasy, ny dinika ambany tafontrano hataontsika eto.
← Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo Asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana – 8 jona 2021
Fanolorana fotodrafitrasa tao amin’ny EP1 →